Mareykanka oo Dowladda Ruushka ugu hanjabay weerar culus hadii uusan ka waan toobin…. | Arrimaha Bulshada
Home News Mareykanka oo Dowladda Ruushka ugu hanjabay weerar culus hadii uusan ka waan toobin….
Mareykanka oo Dowladda Ruushka ugu hanjabay weerar culus hadii uusan ka waan toobin….
Bulsha:- Ku xigeenka Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Wendy Sherman ayaa uga digtay Ruushka inuu kala doorto diblomaasiyad amaba iska hor imaad dhex mara Galbeedka.
Balse waxay sheegtay inay jiraan meelo kale oo la isaga soo dhowaan karo, isla markaana Ruushka uu ku qasban yahay inuu go’aansado waxa xiga ee dhici doona.